Umphezulu Isusa Ubushushu umzimba Factory | I-China umphezulu weskripthi sokuShushubeza abaThengisi abaXhasi kunye nabaXhasi
Ubuso obusikiweyo Ubushushu umzimba-SPA
Iyunithi ebandayo (iyunithi) imodareyithwa emva kohlobo lweVotator yesitshisi sokufudumeza umhlaba kwaye idibanisa izinto ezizodwa kuyilo lwaseYurophu ukuzisebenzisa ezi zimbini zehlabathi. Yabelana ngezinto ezininzi ezitshintshanayo. Ukutywinwa koomatshini kunye neencakuba zokutshiza ziindawo eziguqukayo. Isilinda sokuhambisa ubushushu sinombhobho kuyilo lombhobho ngombhobho wangaphakathi wemveliso kunye nombhobho wangaphandle wokupholisa ifriji. Umbhobho wangaphakathi wenzelwe inkqubo yoxinzelelo oluphezulu kakhulu. Ibhatyi yenzelwe ukupholisa ngokuthe ngqo komphunga weFreon okanye i-ammonia.
Umphezulu Okhutshiweyo Ubushushu umzimba-SPX
Uluhlu lwe-SPX olukhuhliweyo lokutshisa ubushushu ikakhulu lufanelekile ukufudumeza okuqhubekayo kunye nokupholisa i-viscous, sticky, ethe-ethe-ethe kunye nokutya okuvelisa ukutya. Ingasebenza kuluhlu olubanzi lweemveliso zemithombo yeendaba. Isetyenziswe kwiinkqubo eziqhubekayo ezifana nokufudumeza, ukupholisa i-aseptic, ukupholisa i-cryogenic, i-crystallization, i-disinfection, i-pasteurization kunye ne-gelation.
Umphezulu Isisongelo Ubushushu umzimba-SPT
UFthermI-SPT ye-SPT esikiweyo yokutshisa ubushushu indawo efanelekileyo yokutshintsha indawo yokutshintsha ubushushu beTerlotherm, nangona kunjalo, UFtherm I-®SPT SSHEs ixabisa ikota kuphela yexabiso labo.
Ukutya okuninzi okulungiselelwe kunye nezinye iimveliso azinakufumana olona tshintsho lushushu lobushushu ngenxa yokuhambelana kwazo. Umzekelo, ukutya okuqukethe iimveliso ezinkulu, ezinamathelayo, ezinamathelayo okanye ezinamakristali zinokuvala ngokukhawuleza okanye zivale iindawo ezithile zomzimba obushushu. Esi sitshisi sokufudumeza sokutshisa sifunxa iimpawu zezixhobo zaseDatshi kwaye samkela uyilo olukhethekileyo olunokufudumeza okanye lupholise ezo mveliso zichaphazela ifuthe lobushushu. Xa imveliso ifakwa kwisilinda ephathekayo ngempompo, isibambi sokutshiza kunye nesixhobo esitshintshayo siqinisekisa ukusasazwa kweqondo lobushushu, ngelixa ngokuqhubekekayo nangobunono ukuxuba imveliso, loo nto ikhutshelweyo kude nomphezulu wotshintshiselwano lobushushu.
Umphezulu Isisongelo Ubushushu umzimba-SPK
Isitshisi sokufudumeza esingagungqiyo esinokusetyenziselwa ukufudumeza okanye iimveliso ezipholileyo nge-viscosity ye-1000 ukuya kwi-50000cP ilungele ngokukodwa iimveliso ze-viscosity eziphakathi. Uyilo lwayo oluthe tyaba luvumela ukuba ifakwe ngendlela efanelekileyo. Kwakhona kulula ukuyilungisa kuba onke amacandelo anokugcinwa emhlabeni.
Imargarine Pilot Plant Model SPX-LAB (isikali seLebhu)
Isargarine / ukunciphisa isityalo sokulinga siqukethe itanki encinci ye-emulsification, inkqubo ye-pasteurizer, Isikhuseli sokutshisa ubushushu esingaphezulu komhlaba, inkqubo yokupholisa ekhukhulayo yomphunga, umatshini womsebenzi, umatshini wepakethe, i-PLC kunye nolawulo lwe-HMI kunye nekhabhathi yombane. Inketho ye-Freon compressor iyafumaneka. Zonke izinto ziyilelwe kwaye zenziwe ngaphakathi endlwini ukulinganisa izixhobo zethu zemveliso epheleleyo. Onke amacandelo abalulekileyo ngophawu lwangaphandle, kubandakanya iNokia, iSchneider kunye neParkers njlnjl. Inkqubo ingasebenzisa iammonia okanye iFreon ukupholisa.